Ukulandela oothixo begrun, iGreen Day kunye ne-Gorillaz yaseDamon Albarn
Ngelixa ihlabathi lomculo lihlaziyiweyo kwiNgqungquthela yaseHurt Cobain, i- Montage yeHeck , hlola ezinye eziyimfuneko 'ii-90 zeDoksi zeDwala, ezikhupha umlutha, ukunyuka kunye nokunyuka kokungabikho.
UKathleen Hanna waguqula umlindi wesifazane njengowesifazane ohamba phambili kwi- Bikini Kill waza wazisa umfazi ukudansa umculo kunye neLe Tigre. I-Punk Singer igxininisa ngokugqithiseleyo kukumkanikazi we-riot-grrls, ukuqokelela inkcazo evela kumlingane womnye uKathi Wilcox ; Abadumileyo uSleater-Kinney nomyeni wakhe, i-Ad-Rock ye- Beastie Boys . Akugcini nje ukugqamisa ukuphumelela- kukhanya kwakhona kwi-Hanna yomzabalazo we-Lyme Disease.
Ngo-1991: Umnyaka wePunk Broke
"Akusiyo i-clone, ayikho into engalunganga; kuphelile nje, buya kumntu! "umemeza uSonston phambi kwendoda yaseTshawn Moore kule filimu ye-ramshackle ngokubhekiselele kwihambo lakhe laseYurophu. Iingqungquthela zezobugcisa ezithandwayo eziza kuphuma ngokukhawuleza kwiimagazini ezinjenge- Elle , kodwa wayengekho kude kakhulu. I-movie ibonisa kwakhona i- Nirvana nje ngaphambi kokuba ikhuphe phezulu.
Metallica - Olunye uhlobo lweMonster
Ukuba e-band kunjengokutshata abantu abathathu okanye ngaphezulu. Ulwa, uyakhankanya, uyakha, unamaxesha amahle. Kwaye ngamanye amaxesha uyazibuza oko kukugcinayo ndawonye. I-Metallica yinto ephakamileyo yokucebisa umtshato phakathi kweengoma zomculo kunye nomlimi wabo, uBob Rock. Ngezinye izihlandlo ezihlaziyileyo (umculi weLars Ulrich's whiny tirades) kunye nokukhathazeka (inkokheli uJames Hetfield ngokukhawuleza ukuvuselela utywala ngokukhawuleza), le seshoni yonyango ithelevishini is stunner.
Ifama yeFama / Ukubuyisela
Singazikhethela kalula i- Broadway Idiot njenge-documentary ebalulekileyo yoSuku lwe-Green Day , kodwa ¡Cuatro! ungaphantsi kweBillie Joe bonisa kunoko. Apha, i-punk-pop trio (engumdlali oncedisa ixesha elide, uJason White) uzama ukuhlaziya ama-epic yayo, i- American Idiot yama-2004 ne-2009 ye- 21st Century Breakdown , kunye ne-three-tandem ekhutshwayo ngonyaka ka-2012. ubona umculi / ugqirha uBillie Joe Armstrong ehambela kwi-booze kunye ne-pill addiction. Kuyasiqabuleka ukuba le filimu yayingumngceli wexesha kwaye ingabi yindoda eyaziwayo.
Musa ukuvumela i-vibe enhle ye-trailer uyikhohlise- Yima! Ngumhla wamhla weHatfield kunye noMcCoys imfazwe phakathi kwama-cohorts yaseBrian Jonestown kunye neDandy Warhols. Bobabini iziqulatho zengxondorha engaphantsi kwee-1990, le doc ibona iindlela zabo ezingafaniyo: I-Dandies ijabulisa ezintshontsheni ezincinane ezinjengokuthi "Akunjalo ukuba UngumJuni Wokugqibela Emhlabeni"; I-Massacre implode phantsi kwe-Anton Newcombe ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi kunye nokuziphatha kakubi.
Ukuhlangana kwabantu kulula
I-documenthead ye-Radiohead ka-1999 yindlela yayo ye-robotic "I-Fitter Happier" esebenza. Phakathi kwe-bleeps ephazamisayo kunye neengqungquthela ze-albhamu yayo ye-1997, OK ikhompyutha , ibhendi yaseBrithani yenyuka kwi-khontshi yayo idityanisiweyo yodlulisela i-concerts, intliwano-ndlebe kwaye ibonisa ukubonga kumaphephandaba. Ukubukela inkokeli engummangaliso uTom Yorke ukuzama ukuhambisa intetho yokwamkelwa kwe-NME ibonisa indlela abaxakekileyo ngayo loo menzi womsindo ebudeni bedijithali-ekuya kuthi ekugqibeleni bahambe ne- Kid A ne- Rainbows .
Hamba uye e-USA
Njengoko kuthethwa kunye nokuvakala nje ngokuba 'i-90 enye ilitye enye, kwakukho into ebalulekileyo yokudabuka, nayo. I-Hole drummer Patty Schemel ivumela ababukeli ukuba bangabandezeleka kwiHit So Hard , i-warts-kunye-sonke isityhilelo. Ziyinto elinganayo yokubhiyozelwa kwababhinqa bamabhinqa bohlobo kunye nokulila kwezidakamizwa zee-toll ezithatha indawo. Ifilimu iya kukubonga ukuba inkosi enesakhono esinomdla isinda kwiintsuku zakhe ezimnyama.
Kuthetha ukuba xa udliwano-ndlebe ebuza i-Smashing Pumpkins egcina i-band ndawonye, ​​amalungu agxotha ukuhleka. Ividiyo ye-1994 i- Vieuphoria ithatha abalandeli kwi-behind-the-scenes bahamba ngeBilly Corgan ye- Siamese Dream kunye nohambo lwayo olulandelayo. I-Interlaced ne-chaotic, i-spellbinding performances yi-skirts skirts ezikhupha u- Alice kwi-Wonderland kunye no-James Iha inja ethandekayo, i-Bugg Superstar.
Ayikho Ikhohlo lokuKhohla ukuhamba
Ngaphambi kokuba ahambe kunye ne-cartoon band Gorillaz , iDamon Albarn yanqoba umhlaba weBrit Pop nge- Blur . Iqela elinemisebenzi elinemveliso elinesibini lalinalo isabelo sayo kunye nehla kodwa ngokuqhelekileyo kwaziwa ngokuba yintsimbi efana ne "Ingoma 2" kunye ne "Amantombazana & Amantombazana." Lapha, ezi zinto ezine zikholelwa ukuba i-ciration yangonyaka ka-2009 xa i-guitarist uGraham Coxon ihamba ngokutsha. Ingummiselo kumandla omsebenzi, ukususela kwiminyaka elishumi elithembele kakhulu entliziyweni.
Nguwuphi na umlawuli ongcono ukukhusela lesi sikhumbuzo sika-Seattle esona siphumelele kuneCameron Crowe? Emva koko, wanika uPearl Jam ikhefu elikhulu encwadini yakhe yothando kwi-grunge, i- Singles . Ukudibanisa umgca wokugcinwa kweengqungquthela zeziqalo zebhendi kunye neziqephu eziphathekayo zekonsathi, le doc ayikho into engekho-ntsholongwane eyenza ukubonakaliswa komculo wengoma kwizinto zayo eziphambili. Kuyinto enobuchule kunye neengqungquthela, eziqinileyo kwaye zivuthiwe.
Okunye kufuneka-ukubukela ii-docs?
Ngaba asilahleki naziphi na iimpawu zomculo eziyimfuneko ezibandakanya 'abaculi bama-rock bama-90? Masiyazi kwiphepha lethu le-Facebook: https://www.facebook.com/about90srock
Iingxelo ezivela kwii-90 zamaLandi amakhulu kunazo zonke
Indlela u-Muhammad Ali abangela ngayo i-Hip-Hop
UYosefu waseNazarete: Izifundo ezivela kuMbabi
Izizathu zeMfazwe yase-Iraq
Imizekelo yeeNgxelo ezifungelweyo kunye neLwimi oluNkohlakalo kwi-Pop Music
Ukufumana iMithombo yophando
Ukuzalwa noBomi bukaYesu
Indlela yokukhetha izicwangciso zokwakha
Yiyiphi i-Olimpiki yokumisa?